PlanetCreator – NYDC
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွင်း လျာထားသည့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဧရိယာများ၊ စပ်ဆက်ဧရိယာများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအစည်းအဝေး
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွင်းလျာထားသည့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဧရိယာများ၊ စပ်ဆက်ဧရိယာများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအစည်းအဝေးကို၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၂)ရက်နေ့တွင် တွံတေးမြို့နယ်၊ အထက်တမာတကော တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးသို့ခလောက်ချိုက်၊ အထက်တမာတကော၊ မငေး၊ ထိန်ကုန်း၊ ကံရွာ၊ ဗျောက်ရိုး ၊ ကုလားတန်း၊ သုံးအိမ် ၊သံဖြူရုံ၊ လက်ပံဂွ၊ ကျွန်းကလေး၊ ဂျောင်ဝိုင်း နှင့် အလပ်ချောင်း ကျေးရွာများမှ ဒေသခံပြည်သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့သစ်
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာ ကျေနပ်အားရစရာ တုံ့ပြန်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပထမတစ်ခုကတော့၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ National Development and Reform Commission of China (NDRC) ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Ning Jizhe ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အလုပ်ခရီးစဉ်အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်က လာရောက်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
Industrialisation effort will cover an area over twice S'pore's size Tan Hui Yee: Indochina Bureau Chief In Yangon Singapore's former foreign minister George Yeo has been tapped to help lead the development ofaYangon city extension billed to spur growth for Myanmar, just like what Shenzhen city did for China. The massive industrialisation effort [...]
NYDC Challenge ပထမအဆင့်အတွက် NYDC နှင့် ထိပ်တန်း အခြေခံအဆောက်အအုံကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့ မူဘောင် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် လက်မှတ်ရေးထို
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၂) ရက် – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး နှင့် ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် (NYDC) ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဒေါ်နီလာကျော်နှင့် ဟောင်ကောင်စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) တို့သည် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း ပထမအဆင့်၏ အခြေခံအဆာက်အဦ လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာ (Project Proposal) ကို ပြင်ဆင်တင်သွင်းရန် အတွက် ယနေ့ သဘောတူညီ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ဤသဘောတူညီချက်မူဘောင်သည် NYDC Challenge Model ၏ ကနဦးအဆင့်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီ၍ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ကုမ္ပဏီမှ စီမံကိန်း၏ [...]
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်မြစ်အနောက်ဖက်ကမ်းရှိ မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ရန်ရှိခြင်း
ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် (NYDC) ဖွဲ့စည်းထူထောင်ကြောင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ NYDC ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ရန်ကုန်မြစ်အနောက်ဖက်ရှိ မြေနေရာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေး၊ နေအိမ်များနှင့် အလုပ်အကိုင်များ တိုးတက်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းသည် ရန်ကုန်မြို့သစ်ဟု အမည်တွင်မည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်မှုပြီးစီးပါက ယင်းဒေသသည် စင်ကာပူနိုင်ငံ အရွယ်အစားထက် နှစ်ဆ ကျယ်ဝန်းမည်ဖြစ်သည်။ NYDC ကို အထူးကမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ရာနှုန်းပြည် ပိုင်ဆိုင်သည်။ မြို့သစ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ပထမအဆင့်နှင့် ဆက်စပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလျံကျော် ကုန်ကျမည်ဟု မျှော်မှန်းသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများတွင် [...]
ရေကြီးရေလျှံမှုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မုတ်သုံဝင်ခါနီးတာနဲ့အမျှ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်တွေဟာလည်း ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ရေမြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာလည်း မိုးရာသီရောက်တိုင်း ကြုံတွေ့ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မြို့ပြစီမံကိန်းကိုရေးဆွဲတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ ဗိသုကာပညာရှင်၊ ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာနဲ့ အိမ်ယာစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူတွေ ဘယ်သူမဆို နေရာတစ်ခု၊ မြို့သစ်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ ရေလွှမ်းမိုးနိုင်မှု သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို နားလည်ထားဖို့ …
TowardsaSafe, Smart, Clean and Liveable Yangon
လုံခြုံစိတ်ချမှု၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများပြည့်စုံမှု၊ သန့်ရှင်းမှု နှင့် ပြည့်စုံသော နေထိုင်ရန် အဆင်ပြေကောင်းမွန်သည့် ရန်ကုန်မြို့တော်ဆီသို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မြို့ပေါင်း ၁၄၀ ရဲ့ မြို့ပြလူနေမှုစနစ်မြင့်မားမှုကို တိုင်းတာစာရင်းပြုစုထားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေလို့အဆင်ပြေကောင်းမွန်ဆုံးမြို့များဆိုတဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို The Economist Intelligence Unit အဖွဲ့က နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီမြို့များကို တည်ငြိမ်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထား၊ ပညာရေး၊ …
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း ကိုဘာလို့ အကောင်အထည်ဖော်ရတာလဲ
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း ကိုဘာလို့ အကောင်အထည်ဖော်ရတာလဲ မင်္ဂလာပါ။ New Yangon Development Company မှာ ဒုဥက္ကဌ နဲ့ CEO တာဝန်ယူထားခွင့်ရတဲ့အတွက် အင်မတန်ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်တဲ့ New Yangon Development Company (NYDC) ကိုတည်ထောင်ပြီး ရန်ကုန်မြစ်တစ်ဘက်ကမ်းမှာ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့်အကြောင်းတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်က ကျွန်တော်တို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး …
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ အားပေးကူညီနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ အားပေးကူညီနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစိုးရက အစိုးရအလုပ်မလုပ်ဘဲ ဘာလို့စီးပွားရေးလုပ်နေတာလဲ? New Yangon Development Company လို့ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီး စီးပွားရေး ဝင်လုပ်ဖို့လိုလား? ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက စီးပွားရေးအင်ပါယာ ထောင်မလို့လား? ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက New Yangon Development Company ထူထောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ခုနကမေးခွန်းတွေ မေးနေကြပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းတွေဟာ သဘာဝကျပါတယ်။ …